घर लिलाम भयो श्रीमती आफुखुशी गर्ने अवस्थामा तै पनि मेरो साथी रविको न्यायको लागि म बोल्छु रामकृष्ण ढकाल भाबुक हुँदै – PanchKhal Online
Home/समाचार/घर लिलाम भयो श्रीमती आफुखुशी गर्ने अवस्थामा तै पनि मेरो साथी रविको न्यायको लागि म बोल्छु रामकृष्ण ढकाल भाबुक हुँदै
घर लिलाम भयो श्रीमती आफुखुशी गर्ने अवस्थामा तै पनि मेरो साथी रविको न्यायको लागि म बोल्छु रामकृष्ण ढकाल भाबुक हुँदै
ललितपुरस्थित लालिगुरास शहकारी संस्थाले विभिन्न तरिकाले ठगेको भन्दै पिडितहरु मिडियामा आउन थालेका छन । चर्चित कलाकार राम कृष्ण ढकालले ऋण नतिरेको भन्दै अखबारमा सूचना निस्किएपछी फेरी यस संस्था चर्चामा आएको हो । सुचना आए लगत्तै अन्य पिडितहरु पनि मिडियामा आएका हुन् । तर सहकारीले भने ऋण नतिरे पछी नियम संगत ढंगले प्रोपर्टी लिएको बताउदै आएको छ ।
राम कृष्ण ढकाल जस्तै सहकारीका अर्का पिडित पनि मिडियामा आएका छन । घर जग्गा कारोबारको सिलसिलामा लालिगुरास सहकारीबाट ऋण लिएका रामकृष्ण ढकाल र अन्य पनि आफ्नो करोडौको जग्गा लालिगुरासले आफ्नो नाममा लिएको आरोप लगाउदै मिडियामा आएका हुन् । उनिसंग गरिएको कुराकानी हेर्नुहोस ।
विश्वका उत्कृष्ट २५ ‘वाटर पार्क’ जहाँ बच्चादेखि वृद्धसम्म रमाउँछन्
पछिल्लो समय मनोरञ्जनका अनेक विकल्पहरु आउन थालेका छन् । मानिसले धेरैभन्दा धेरै प्रकृतिसँग नै रमाउने भएकाले प्राकृतिक सम्पदालाई नै आधार मानेर मनोरञ्जनका साधन बनाउने गरेका छन् ।
यीनै मध्येको एक हो । पानी, अर्थात पानीबाट हुने मनोरञ्जन । नेपाल जलस्रोतको धनी देश भएपनि पानीबाट हुने मनोरञ्जन र त्यसबाट लिनसक्ने फाइदाबाट भनेजस्तो लाभ लिन सकेको छैन । आज हामी तपाईंलाई विश्वका २५ पानीबाट बनेका पार्कका तस्वीर प्रस्तुत गर्नेछौं । जहाँ तपाईंले पुगेर रमाइलो गरेको अनुभूति गर्नुहुनेछ ।
वीच पार्क, ब्राजिल
१) सियाम पार्क, स्पेन
२) वीच पार्क, ब्राजिल
३)वाटरबम बाली, इन्डोनेसिया
४)डिज्नी ताइफुन लगुन वाटर पार्क, फ्लोरिडा अमेरिका
५) अक्वाभेञ्चर वाटरपार्क, युनाइटेड अरव इमिरेट्स
६) डिज्नी ब्लिज्जार्ड बीच वाटर पार्क, अर्लान्डो फ्लोरिडा
७) वाइल्ड वादी वाटर पार्क, युनाइटेड अरब इमिरेट्स
८) हट पार्क, रियो क्वान्टे, ब्राजिल
९) थर्मस डोस लरनजाइस, ब्राजिल
१०) होलीडे वर्ल्ड एन्ड स्प्लासिन सफारी, इन्डोनेसिया
११) इको पाक्र्यू एरियल डिअजुदा, ब्राजिल
१२) अक्वाभेञ्चर वाटर पार्क एट एटलान्टिक्स प्याराडाइज आइसल्यान्ड, न्यू प्रोभिडेन्स आइसल्यान्ड
१३) ब्लुवाटर लगुन, अष्ट्रेलिया
१४) यस वाटरवर्ल्ड अबुधावी, युनाइटेड अरब इमिरेट्स
१५) अक्वाटिका, ओर्लान्डो फ्लोरिडा
१६) दी वाटर पार्क, ग्रिस
१७) फासौरी वाटरमेनिया वाटर पार्क, साइप्रस
१८) वाटरवर्ल्ड वाटरपार्क, साइप्रस
१९) डिरोमा अक्वा पार्क, ब्राजिल
२०) कोस्टा मार्टिनेज, स्पेन
२१) वाटर कन्ट्री अमेरिका, भर्जिनिया
२२) जंगल अक्वा पार्क, इजिप्ट
२३) मकादी वाटर वर्ल्ड, इजिप्ट
२४) अक्वालान्दिया, इटाली
२५) स्लाइड एन्ड स्प्लास वाटर स्लाइड पार्क, पोर्चुगल
शालिकरामको भिडियो हेरेपछि रविले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
अदालतमा रविले दिएको भिडियोको बयानले सबैलाई बनायो चकित, वोकिलको अघि खुलेरै यसो भनिदिए !
कतारमा श्रीमानको निधन भएको खबरपछि ५ महिनाकी गर्भवती टीका लिम्बुले पनि छाडिन संसार !
नङमा टक्क अडिने सिरुपाते खुकुरीको मूल्य ३२ हजार, खुकुरी देखेर ग्राहक समेत अचम्मित